December 2018 – Heemaal News Network
Senetka Maraykanka Oo U Codeeyey In Maraykanku Joojo Kaalamada Milatari Ee Uu Siiyo Sacuudiga
Xildhibaanada aqalka senate-ka ayaa u codeeyay in milatariga Mareykanka uu joojiyo taageerada uu sacuudiga ka siiyo dagaalka Yemen. Waxa ay sidoo kale dhaxal sugaha Sacuudiga ku eedeeyeen in uu ka dambeeyay dilikii weriye Jamal Khashoggi. […]
Senatarada Aqalka Saree e Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Koonfur Galbeed ayaa war-saxaafadeed kasoo saaray xarigii ay shalay dowladda Soomaaliya kusoo qabatay Mukhtaar Roobow Abu Mansuur. Hoos ka aqriso warsaxaafadeedka. War-Murtiyeed: […]
Maraykanka Oo Canbeereeyey Dhoola Tus Milatari Oo Wadamada Ruushka Iyo Venezuela
Iyadoo aysan jirin dagaal toos ah iyo xaalad kacsanaan ah oo u dhaxeysa dowlada Ruushka Iyo Mareykanka ayaa hadane Ruushka heshiis iskaashi Milatari ah waxaa uu la galay dowlada Venezuela. Xoghayaha Arimaha dibeda mareykanka Mike […]
Madaxdweynaha Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa caawa magaalada Muqdisho casho sharaf ugu sameeyey wafdigii uu horkacayey Madaxweynaha Eritreya Isias Afawerk oo booqasho labo qaadaneysa ku jooga magaalada Muqdisho. Waxaa ka qeyb galaya xafladan, Wasiiro, xildhibaano, […]
Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa magaalada Dooxa ku kala saxiixday shan heshiis iyo Sedex is-afgarad oo khuseeya arrimha maalgashiga, ganacsiga iyo kobcinta dhaqaalaha. Guddi farsamo oo ka socda Soomaaliya iyo Qatar ayaa lagu heshiiyay in […]
Madaxwayne Cagjar Oo Waraystay Haween ku Xidhnaa Jeel Ogadenia Madaxwaynaha DDS ayaa kulan la qaatay Culimo ku Xidhnaa jeel Ogaadniya Dawladii hore